म समलिङ्गी हुँ – BRTNepal
सुषमा देवकोटा २०७३ कार्तिक २४ गते ९:०० मा प्रकाशित
चुरोटको धुँवा सिलिङतिर फ्याक्दै मैले उसलाई प्रस्ताव राखें “म तिमी सँग फिजिकल रिलेसन राख्न चाहन्छु अन्जु । ”
रक्सीको नसा अलिअली चढ्दै थियो । अन्जुले मेरो कुरा पत्याईन क्यारे, हाँस्दै भनी ,”तिमी पुरै झ्याप भयौ के हो ?”
म होसमै भन्दैछु साँच्चै म तिमीसँग सेक्स गर्न चाहन्छु
मैले फेरी यही कुरा दोहोर्याएपछि उसले पिउँदै गरेको रुस्लान भोड्काको आधा ग्लास टेवलमा राख्दै भनी “के हावा कुरा गरेको तिम्ले ।”
खै किन हो उसले मेरो कुरालाई हावा भनेपछि झनक्क रिस उठ्यो र भनेँ, “तिमी जस्तो शिक्षित केटी यो कुरालाई हावा ठान्छेउ ? सेक्स मानिसको जीवनको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।”
म रिसाएको देखेर उ केही सतर्क भई र मेरो हातमा हात राखेर भनी “मलाई सेक्सप्रती आपत्ति होइन तर तिमी केटी भएर केटी संगनै सेक्सको प्रस्ताव राख्दैछेउ । ”
चुरोटको ठुटो एस्ट्रेमा ठोस्दै भनेँ, “म तिमीलाई यस कारण मन पराउँछु किनकि म केटी होइन ।”
हाँस्दै भनी उसले “मजाक पनि लास्ट हंसाउने पाराको गर्छेउ तिमी ।”
रातको नौ बज्दै थियो मेरो फ्लाटको बैठकमा हामी दुई रक्सी पिउँदै थियौँ । मैले नै बोलाएको थिएँ अन्जुलाई, उ खुसी हुँदै आई । आज म उसलाई आफ्नो मन बिसाउँदै थिएँ तर उ मेरो कुरा पत्याउन तयार नै थिइन ।
फेरी झोक्कीएं म, “तिमीलाई मजाक लागिरहेको छ मेरो कुरा ? म बर्षौ देखी तिर्खा र घुटन सहेर बाँचेको छु, मलाई बुझ्ने कोही भएन न आमाबाउ, न साथीभाई न समाज ।”
उ हाँस्न छोडी र भनी “त्यस्तो होइन सरु म तिमीलाई बुझ्छुनी । सानैबाट हामी नजिक छौँ, तिमीत त्यो बेला मलाई अरू सँग हिड्न पनि दिन्थीनौ । ”
उसले सानो बेलाको याद दिलाएपछि मेरो रिस शान्त भएझैं भयो । मनको कुण्ठा जाँडले पग्लन्छ क्याहो उ सँग एउटै कुरा दोहोर्याईरहेको थिएँ । खै किन हो मलाई लाग्दै थियो अन्जुले मलाई बुझ्छे । सानैबाट उसले मेरो कुरा मान्दै आएको भएर पनि यस्तो लागेको हुन सक्छ
“आजको रात मस्ती गर्नु पर्छ, तिमी साथ दिन्छेउ नि मलाई” मैले उसका आँखामा आँखा गाडेर प्रश्न गरेँ ।
सायद उसलाई बिस्तारै पत्यार हुन लागेको थियो म अरू भन्दा फरक त पक्कै छु भन्ने । उसले सोची होली यो एउटा केटी सँगको प्रेम र शारीरिक सम्पर्कमा यति धेरै आशक्त हुनुमा गडबडी त जरुर छ ।
“कसरी पत्याउँ तिमी केटी होईनौ भन्ने” उसले मेरो परीक्षा लिन खोजी ।
म १० वर्ष पछाडि फर्किएर उसलाई सम्झाउन थालेँ ।
तिमीलाई याद होला, हामी ८ कक्षामा पढ्दा मेरो र सन्दीपको ठुलै झगडा परेको थियो । त्यो झगडाको कारण तिमी थियौ । तिमी मलाई सबैभन्दा नजिक लाग्थ्यो उसोत कक्षाका सबै केटीहरू मलाई राम्रै लाग्थ्यो तर केटाहरू मलाई कैलेई मन परेन । केटाहरुसंग मनमा सधैँ एउटै कुराको अहमं हुन्थ्यो त्योे हो म उनीहरू भन्दा म सब कुरामा अगाडी छु ।
तिमी र सन्दीप नजिक थियौ । तिमीहरू २ जना जिस्केर बोल्ने, सँगै पढ्ने, घरमै भेट््ने गरेको मलाई पटक्कै मन परेको थिएन । मलाई लाग्दै थियो, तिमी म सँग टाढा हुँदैछौ र सन्दीप सँग नजिक । यो कुराले धेरै दिनसम्म तनाव दिइरह्यो । तिमीलाई पनि भनेँ उ सँग नजिक नभौं तर तिमी सधैँ उसको प्रशंसा नै गर्थेउ जुन कुरा मलाई सह्य हुँन्थेन । त्यसैले एक दिन मैले नै सन्दीपसंग यो कुरालाई लिएर झगडा गरेँ, कक्षामै भएको यो झगडाले ठुलो रूप त्यति बेला लियो जब मैले उसलाई जोडले धकेलिदिंदा झ्यालमा ठोक्कीएर उसको निधारमा ३ वटा टाँका लगाउनु पर्‍यो ।
यो कुरा घर सम्म पुग्यो, मैले आमाबाट कुटाई खाएं त्यो दिन । तर मनमा खुसी थियो सन्दीपलाई चोट लाग्नेगरि धकेलेकोमा । यो घटनाले तिमी दुखी थियौ होला, कति दिन त बोल्न हाँस्नै छोड्यौ । तिम्रो परिवारले पनि तिम्रो र सन्दीपको सम्बन्ध बारे केरकार गरेछन् । साथीहरूले पनि आ आफ्नै तर्क निकाले जे होस् त्यो दिनबाट सन्दीप तिमीसँग बोल्न छोडेको थियो म दंगदास थिएँ ।
मेरो कुरा सुनेर अन्जुले के सोचेर हो एउटा उदास सुस्केरा छोडी ।
म केहिबेर रोकीएर फेरी सुरु भएँ अं नौ कक्षामा गएको पहिलो दिन मैले ब्वाईजकटमा कपाल काटेर गएँ । नजिकैको सैलुनमा गएर कटाएको थिएँ, घरमा नसोधी । त्यो दिन पनि आमाको गाली र कुटाई दुवै खाएं । डर थियो त मेरो कपाल देखेर तिमी मसँग हिड्नै छोडौली भन्ने । तर तिमी म सँग मिलीरहेउ ।
म सुनाई रहेको थिएँ अन्जु सुनिरहेकी थिई मानौं यो नयाँ कथा हो हजुरआमाले सुनाएको जुन पहिले उसले कैलेहि सुनेकी छैन ।
मैले रक्सी थप्दै भनेँ, “ए के लाटी जस्तो बसेको कुरा गरन ।”
उ फिस्स हाँसी “तिम्रो सुनिरहेको छु । ”
“हामी ११ पढ्दाको चुरोट र १२ बढ्दै गर्दाको जाँड काण्ड याद छ तिमीलाई ?” मैले हाँस्दै सोधेँ
“तिमी त महसुर हौ यार” उ पनि हाँसी यति भनेर ।
मलाई चुरोट खाने बानी त १० कक्षामा पढ्दानै लागेको थियो तर कसैलाई भनिन । त्योदिन कलेजमा पढ्न अल्छी लाग्यो र क्लास छोडेर छेवैको चिया पसलमा गएर चुरोट खाएको साला सुबेदी सरले देखेर ढुन्डरी पिट्यो नि । म ठुलै स्वरमा हाँसे आफ््नो बिगततीर फर्केर ।
तिम्ले क्याम्पस प्रमुखलाई नै भनेकी थियौ, “किन कराइरको यार कलेजमा खाएको हो र ? आफ्नो पैसाले खाँदा पनि कलेजका सबैको टाउको दुखाई किन भएको ?”अन्जुले ती दिनका कुरा सम्झंदै थपि ।
म फेरी हाँसे चुरोटको लामो सर्को तानेर “साला सरहरुले मलाई रेस्टीकेट नै गर्दिने कुरा गरेका थिए । हाम्रा बाउले सरहरुसंग मेरो तर्फबाट माफी मागेर जोगीएं ।”
त्यो घटनापछि घरका सबैजना मसँग राम्रो सँग बोल्न छोडिरहेका थिए । मेरो विवाह गरेर पठाईदिने सल्लाह हुन्थ्यो घरमा ।
तिमीलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला म आफ्नो बिहेको कल्पना गर्दा आफ््नो छेउमा श्रृगारले सजिएकी सुन्दर युवतीको कल्पना गर्थें ।
एक दिन घरमा एउटा केटाको कुरा लिएर फुपु आउनु भयो । म साह्रै तनावमा थिएँ । त्यो बेला मलाई आफू समलिङ्गी हुँ भन्ने थाहा थिएन । खाली विवाहको कुरा पटक्कै मन परेको थिएन ।
साँझ घरबाट निस्कीएं, बारीको कुनामा बसेर एउटा चुरोट सल्काएर खाएं र ओरालो लागें, मनमनै कुरा खेलाउँदै । १५ मिनेटको ओरालो झरेपछि रतने नेवारको घरमा पुगें, ३ \_४ जना मिजार काकाहरू रक्सी खाँदै गफ्फीरहेका थिए । मलाई देखेर भने “ठुले बाहुनकी छोरी आईन्, ”
सुनेर रतनेकी बुढी बाहिर निस्कीन् र सोधीन् “नानी केही कामले आउनु भएको थियो की ?”
म आँगनको काठको मुढामा बसें र रतनेको बुढीलाई भनेँ “खोइ भाउजू रक्सी खाउँत ।”
सबै ट्वाल्ल परे बाहुनकी छोरीले जाँड मागेको देखेर । रतनेको बुढाबुढी अलमल परे । बुढीले हाँस्दै भनी “नानी पनि जिस्कनुहुन्छ ।”
झोकनै चल्यो त्यसको हाँसो देखेर । आफू टेन्सन भएर जाड खान आएको छु तिनीहरू पत्याउँदैनन् ।“ पैसा तिरेर खाने हो बढी नाटक नगर्नु भनेँ रिसाएर ।”
मेरो ताल देखेर सबै मुखामुख गर्न थाले, रतनेकी स्वास्नीले भित्र गएर स्टीलको ग्लासभरी लोकल रक्सी ल्याएर मलाई दिई । पहिलो पटक भए पनि ४ गीलास खाएं र पैसा तिरेर उकालो लागें । खै कसरी हो म घर पुग्नु भन्दा पहिले नै यो हल्ला हाम्रो घरमा पुगेछ ।
घर पुग्दा परिवारका सबै जना पिँढीमा थुप्रीएका थिए । जाँड लागेको थियो ढुनमुनीदै आँगनमा पुगेको थिएँ । आमा गुरुरु दौडेर आएर मेरो मुखमा थुक्दै भन्नु भयो “थुईक्क राँडी तैले हामीलाई यो गाउँमा बस्न नदिने भईस् । यस्तो कुलंगार जन्मनु भन्दा त मेरो कोखै बाँझो भएको भए हुनेथियो ।”
रक्सीले ढलपल भएको थिएँ, कता ढलौं भएको बेलामा घरका सबै मै माथि खनिए ।
दाइले ठुटे कपाल समाउँदै २ चड््कन हानेर भन्यो “निस्कीहाल यहाँबाट । यसले गर्दा मेरा साथीहरूको अगाडी पर्न पनि लाज भएको छ मलाई । ” आमा पनि थपिनु भयो कुट्न, अरू बाँकी तमासे बने ।
यत्रो कुटाई खाएपछि रुनु पर्ने हो तर मलाइ लास्ट हाँसो उठ्यो यिनीहरू आत्तीएको देखेर । मलाई आफूले गल्ती गरको जस्तो लागेकै थिएन । चित्त दुखेको रहेछ परिवार सँग मलाई । मेरो बिचार उनीहरू बुझीरहेका थिएनन्, मलाई छोरी भएर यस्ती बेसोमती भई भनेर सानैबाट भन्दै आएका कुराहरूले मलाई उनीहरू प्रति रिस उठेकै थियो ।
त्यो साँझ भात खाएर सबै ढोका लगाएर सुते म पिँढीमा गुन्द्री तानेर निदाएं । भोलिपल्ट आमाले किन यसो गरेको भनेर सम्झाउनुको साटो मेरो कापी किताब आगो लगाईदिनु भयो फतफताउँदै “पर्दैन यस्ताले पढ्न जान । छोरीको जातलाई पढाउनु नहुने नै रहेछ । कुलमा कसैले नगरेको उबद्रो गर्दै हिँड्ने ।” म हेरिरहें मेरा जलेका किताब ।
त्यो दिनबाट घरका मात्र होइन, गाउँका सबै बोल्न छोडे, तिमीहरूलाई पनि म सँग बोल्न र हिड्न रोक लगाए तिमीहरूको परिवारले ।
त्यसको १५ दिनपछि एउटा केटा खोजे आफन्तले । ४५ वर्षको उमेरको त्यो मान्छे सँग मेरो विवाह हुने भयो । अस्टे«लीया बस्ने केटा, केटा के भन्नु बाउको उमेरको मान्छेलाई । मलाई विवाह गरिंदैछ भन्ने थाहा भएको भए भाग्थें होला । परिवारले पढ्नलाई काठमाडौँ जाने भनेर ढांटे, । काठमाडौँ पुगेको दिन नै त्यसको जिम्मा लगाए मलाई जवरजस्ती टिका लगाएर ।
उसले मलाई काठमाडौको एउटा सानदार घरमा लग्यो, उसको अफन्तको रहेछ । लगेको दिन उसले आफ्नो जीवनको कथाहरू सुनायो । मान्छे खराब लागेन, उमेर नमीले पनि साथीजस्तै थियो उ । मैले बिहे गरेर पनि केटीले जस्तो श्रृगार गर्न परेको थिएन, उ घुमाउन लान्थ्यो । बिरानो सहरमा उ नै साथी जस्तो थियो, मैले मेरो परिवारलाई नै सरापें, म माथि गरेको व्यवहारको लागि ।
बिहे भएको ४ दिन पछि उसले म सँग सेक्सको प्रस्ताव राख्यो, मैले नमान्दा नमान्दै पनि उसको जितको अगाडी हाँरें, म । त्यो रात मलाई आफैँसँग घिन लाग्यो । भागेको भए हुने थियो तर आँट आएन, परिवारले त धोका दिएको थियो अरूको के भर जस्तो लाग्यो ।
बिहेको १ महिना पछि हामी गाउँ गयौँ, उमेर गएर के भयो त पैसावाल रहेछ, स्वास्नी मरिसकीछ, एउटी छोरी रैछे त्यो पनि विदेशी संगनै बिहे भएको रैछ, त्यति राम्रो देशमा बस्ने केटा रैछ भन्ने कै सङ्ख्या बढी भयो । नबोलेका गाउँलेहरू रमाउँदै बोले, परिवार पनि खुसी थियो ।
म अव लोग्ने सँगै अस्ट्रेलिया जाने भएको थिएँ, दङ्ग नै थिएँ म, त्यो ठाउँमा हाम्रो समाजका भन्दा फरक सोचका मान्छे हुन्छन् भन्ने सुनेथें । कागजपत्र तयार भयो र म मीसेस सरीता शर्मा भएर अस्ट्रेलिया पुगें । नयाँ ठाउँ थियो त्यो मान्छेको भिडमा मलाई नरमाईलो लागेन, सोचेको थिएँ, म नै पहिलो हुँ हाम्रो गाउँबाट यहाँ आउने ।
भाषा र चलन सिक्दै गएँ, सिकीहालें छिट्टै । काम खोज्दीनु भने लोग्नेलाई, अव जे भए पनि लोग्ने त भन्नु पर्‍यो । उसले काम खोजीदियो गएको ४ महिना पछि । तलबको भन्दा नि काम पाएकोमा खुसी थिएँ, कसलाई पठाउनु थियो र पैसा ? परिवारले त मागेपनि एक पैसा दिन्न भन्ने ईख पालेको थिएँ ।
काम मन लगाएरै गरे, बिस्तारै एक्लै घुम्न सुरु गरेँ । काम गरेको ४ महिनामा त्यो ठाउँमा काम गर्न मेरै उमेरकी एउटी हप्सीनी केटी आई । क्लारा नाम थियो उसको । उ म सँग मिल्ल थाली , बिस्तारै मलाई पनि उ भन पर्न थाल्यो , हाम्रा विचारहरू मिल्थे ।
यो मील्ती यसरी बढ्दै गयो की म पुरै आसक्त हुन थालेँ उ सँग । उसको छुवाई देखी हँसाई सम्मले ममा तरङ्ग दिन्थो । एक दिन उसले आफू बस्ने ठाउँमा लगी । जीस्कन थाली सेक्सको विषयलाई लिएर, पोर्न मुभीहरु हेरेउँ दुईजना भएर । वाईन पीएउँ । बिस्तारै किसबाट सुरु भएको यात्रा सेक्समा गएर टुङ्गीयो । मलाई यस्तो फील भयो यो पहिलो सेक्स हो जुन सन्तुष्टीको चरम सीमा सम्म पुग्यो ।
सेक्स पछि पनि हामी अंगालीएरै बसेउँ, उसैले भनी मलाई उ समलीङ्गी हो र उसले यो पनि भनी तिमी पनि म जस्तै हौ । यो सुन्दा मलाई पत्यार लागेको थिएन आफू समलीङ्गी हुँ भन्ने तर उ सँगको सेक्सले मलाई दिएको सन्तुष्टी । सानैबाट केटीहरू प्रतिको आकर्षण, मनमा आफू केटा भएको महसुस हुनुले मैले एकिन गरे हो म समलीङ्गी नै हुँ ।
यो यकिन हुँदा मनमा नराम्रो लागेन, क्लारा सगको प्रेमले एउटा आँट थपेको थियो । मनमनै दङ्ग थिएँ आफ्नो वास्तविकता थाहा भएकोमा । हस्त र मुख मैथुनबाट लिएको सेक्सको आनन्दले मलाई पूर्ण सन्तुष्टी मिलेको थियो । समलीङ्गीहरु सबै यसरीनै सेक्स गर्छन् ।
सबै युवा युवतीले सोच्लान् सेक्सको आनन्द लिन केटालाई केटी शरीर र केटीलाई केटा शरीर नै चाहिन्छ । तर सेक्स अनुभूतिको सागर जस्तो लाग्छ मलाई । म समलीङ्गी हुँ भन्ने कुरा मैले ढिला गरी थाहा पाएँ, किनकि हाम्रो समाजले मेरो शरीरको आकार प्रकार र गुप्ताङ्गलाई लिएर मलाई छोरी नै हो भन्ने कुरा लादिरहेको थियो ।
“म आफैँलाई पनि यो कुरा पहिलेनै थाहा भएको भए म बिहे गर्न लागेको मान्छेलाई यो कुरा भन्ने थिएँ” मैले रक्सीको घुट्को लिँदै भनेँ ।
अन्जुले केही शशंकित र केही जिज्ञासु आँखाले मलाईनै हेरीरहेकी थिई । उसलाई यो कुरा र घटना आधा पत्यार भएको थियो या पुरा थाहा भएन तर उ मौन थिई, मानौ अचानक कुनै नसोचेको अप्रीय घटना घटेको थियो ।
मैले नै उसको कुम हल्लाउँदै भनेँ “के भयो तिमीलाई हा हा तिमी चैँ झ्याप भएउ जस्तो छ नि ?”
“होइन होइन अनि के भयो सुनाउ न” उसले जान्न चाहिँ मेरो जीवनको कथा जो उसलाई थाहा थिएन ।
त्यो दिनबाट क्लारा र मेरो दिनहुँ जसो सेक्स हुन थाल्यो । सेक्सको लागि म नै आतुर हुन्थें, सानोमा तिमीसँग कोही नजिक भएको देख्न नसक्ने मेरो रोग यति बेला क्लारा तिर सरेको थियो । क्लारा मात्र किन म पनि उसलाई आफ्नो मात्र सोच्थें । कति पटक उ सँगै रुन्थे, उ फकाउँथी, कति उ उदास हुन्थी म भरोसा बन्थें । सेक्सपाट््नर मात्र होइन हामी गहिरो प्रेममा नै थिएउँ ।
क्लाराले यस अघि पनि ३ सँग सेक्स गरेको कुरा सुनाई एक दिन । उसले भनेकी थिई तिमी सँग झुट बोल्न चाहन्न । उसको कुराले रिस उठेको थियो खै किन हो । तर बिस्तारै मलाई पनि क्लारा बाहेक अरू युवती सँग सेक्सको चाहना बढ्न थाल्यो । यो चाहना सँगै मलाई क्लारा काली र नराम्री लाग्न थाल्यो म सुन्दर युवतीको खोजी गर्न थालेँ ।
सोसियल साईडको ठुलै चक्कर पछि एक जना युवती मलाई भेट्न तयार भई । भोलिपल्ट भेट पनि भयो । त्यो युवती हेर्नमा राम्री थिई । उसको कुरा गराई र हाउभाउ मेरो भन्दा फरक थियो । मैले उसलाई मेरै फल्याटमा लगेको थिएँ, लोग्ने काममा गएको मौका पारेर ।
मैले उसलाई आफ्ना कुरा राखेपछि उसले हाँस्दै भनी “म समलीङ्गी होइन तर मलाई केटी केटी बिचको सेक्स कस्तो हुन्छ जान्न मन छ । कसैलाई यस्तो कुरा सियर गर्दा मलाई मान्छेले कि त बिग्रेकी केटी ठान्थे या त तिमी जस्तै समलीङ्गी ।
समाज त जहाँ पनि हुन्छ मैले यस्तो चाहनाको कुरा राखें भने मेरो लोग्नेनै मलाई छोडीदिन्छ त्यसैले म यो काम तिमीसँग गर्न चाहन्छु, मलाई यो अनुभव लिन मन भएरनै साथी खोजेथे. तिमी भेटीयौं उसले भनी र थपी मलाई आईडिया छैन तिमी सिकाउ । ”
यो दिन त्यो गोरी युवती सँग सेक्स भयो, अर्कै मजा आयो उ अफ्ठेरो माने झैँ गर्थी मलाई त्यो बेला उ भर्जीन केटी जस्तो लाग्यो । १ पटक मात्र सेक्स भयो जाने बेलामा उसले मुस्कुराउँदै भनी “थ्याङक्यु नयाँ अनुभवको लागि । ”
अव मेरो चाहना यस्तै राम्रा युवती बन्न थाले, “जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय ”भन्ने उखान ठिकै हो मैले अरू म जस्तै साथीहरू भेट्दै गएँ ।
जब म जस्तै लेस्वीयनहरु सँगको मेरो भेट बाक्लीन थाल्यो क्लारालाई यो कुरा थाहा भयो, मैले उ सँगको भेटलाई पातलो बनाउँदै गएकाले उसले म माथि निगरानी सुरु गरेकी थिई । एक दिन मेरो मोबाइलमा भएको एउटी युवती र मेरो सेक्स भिडियो उसले देखी । त्यो दिन क्लारा पागल जस्तै भएकी थिई, उ रुदैं थिई मैले उसलाई धोका दिएकोमा । समाप्त भयो क्लारा र मेरो सम्बन्ध, उ दुखी भई तर ममा खास फरक परेन ।
जुन दिन मैले क्लारा सँग पहिलो पटक फिजिकल रिलेसन राखेको थिएँ, त्यो दिनबाट मैले आफ्नो लोग्नेसंग सँगै सुत्न त के हाँस्न बोल्न नै छोडिदिएं, उ सँग बिताएका रातहरु सम्झदाँ मलाई आफूमाथि बलत्कार गरिएको भान हुन्थ्यो, जुन विवाहको सुरुको दिनबाट गरेको महसुस थियो क्लारासंगको त्यो सुखद क्षणले अझ मलाई लोग्ने प्रति घृण थपिन बल गर्‍यो ।
लोग्नेले सम्झायो, फकायो , रोयो करायो अन्तत हात छोड्यो मेरो व्यवहार सहन नसकेर । मैले मुख फोरें म समलीङ्गी हुँ भनेर । सुनेर उ अक्कन बक्क पर्‍यो जस्तो आज तिमी परिरहेकी छौँ।
अन्जुका आँखा म बाट पटक्कै हटेको थिएन, सायद उ सबै सुन्न चाहन्छे, यति बेला उसले रक्सी पिउन बन्द गरेकी थिई । एकाग्र भएर मेरो कुरा सुनिरहेको देखेर अन्जुलाई जीस्काउँदै भनेँ, “तिमी त स्वस्थानी सुनेझै एकचित्त भएर सुनिरहेकी छौँ त म लाउ थप” मैले बोटल उसको ग्लासतिर ढल्काएं ।
“भयो भयो मलाई पुगिसक्यो” उ, तर्सिएझै आफ्नो ग्लास लुकाउदै थिई ।
“सुन्छौ की बन्द गरौँ स्वस्थानिको अध्ययाय ” मैले जिस्कदैं भनेँ ।
उ अलि रिसाएझै गरी “के नचाईदो कुरामा देबिदेउताको नाम जोडेको ।’
मलाई हाँस उठ्यो उसको कुराले कुन देविदेउता ? देबिदेवता हुँदो हो त हामीलाई र तिमीहरूलाई हेर्न दृष्टिकोण समान हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान भरिदिंदो हो सबै मानिसमा । आज तिमी म सँग छौ भोलीदेखी तिमी पनि बोल्न छोड्छेउ मेरो वास्तविकता थाहा पाएर । हेरन म लेस्वियन हुँ भन्ने कुरा मेरो परिवारले थाहा पाएको १ वर्ष भयो तर आजसम्म गाउँमा कसैलाई भन्न सकेका छैनन् । मलाई त “घरमा टेक्न नआईज, हाम्रो लागि तँ मरिस् भनेमा छन् ।”
त्यसैले म अस्ट्रेलियाबाट फर्केपछि काठमाडौमा बसिरहेको छु । मैले बाहिरबाट हेर्दा केटी नै देखिएको छु र मलाई घरबेटीले कोठा दिए । यदि समलिङ्गी हुँ भन्ने थाहा पाएभने मलाई कोठाबाट निकालीदिन्छन् । हिजडासंग कुरा गर्नु हुन्न भन्दै कोही नजिक पर्दैनन्् । यो सब सहनु पर्दाको पिडा अत्यन्त दर्दनाक हुन्छ, बोल्दा बोल्दै कतिबेला आँसु बगिसकेछ, मेरो ।
अन्जुले “नरोउ त्यस्तो केही नसोच” भनी ।
“सुनाउ कसरी आएउ नेपाल ?” उसले फेरी सुन्न खोजी बाँकी कथा ।
लोग्नेलाई थाहा भएपछि उसले मलाई छोड्ने भयो । बिचरा माया पनि लाग्यो यो उमेरमा दोस्रो विवाह गरेर पनि उसको विवाह सफल भएन । मैले उसँग सम्पत्ति दाबी गरिन उ आफैले उ सँग भएको केही रकम दिएर नेपाल पठायो,म आफूसँग पनि थियो कमाएको केही पैसा । आजसम्म चल्दैछ ।
सोचेको छु यसरी आफ्नो वास्तविकता लुकाएर बाँच्नु सहज छैन । पहिले आफ्नो वास्तविकता थाहा नपाएर दुख पाएँ, ऐले नेपाली समाजको डरले खुलेर भन्न सकेको छैन । नेपालमा व्लुडाईमन नामको संस्था छ अरे जहाँ धेरै समलिङ्गीहरुको संरक्षण गरिएको छ भन्ने सुनेको छु । खाषगरी घरपरिवारले सहयोग नगरेका समलिङ्गीहरुलाई संरक्षण दिन्छ अरे । म यकपटक त्यहाँ गएर बुझ्ने चिारमा छु ।
मैले आफ्नो कथा सकाएं अन्जुले एउटा ठुलै रहस्य थाहा पाए झैँ गरी । उसको अनुहार हेर्दा डराए डराए झैँ लाग्थ्यो । अनुहारमा कृत्रीम हाँसो पोतेर उसले भनी खुसी लाग्यो तिमीले आफ्नो सम्झेर मलाई सबै कुरा भनेउ । म पनि सकेको सहयोग गर्छु । भोलि म तिमीलाई फोन गर्छु भनेर उ निस्कन खेजी ।
रातको ११ बज्न ५ मिनेट बाँकी थियो, उ आज मेरै कोठामा बस्ने गरी आएकी थिई तर ऐले जान खेज्दैछे । मैले भनेँ तिमीलाई म के गर्छु र जान लागेको यति राती ?
तर उ मानिन र ढोका खोलेर निस्की मैले उ गएको हेरिरहें, उ होइन यति बेला मैले हाम्रो समाज र यो समाजले हामीलाई हेर्न दृष्टिकोण देखेँ उसको आकृतिमा ।